गर्लान् पल, पूजा र आकाशले ‘पर्खि बसें २’ ? – Nepal's No. 1 Digital Newspaper
गर्लान् पल, पूजा र आकाशले ‘पर्खि बसें २’ ?
By Digital Khabar Last updated Jan 12, 2020 29 0
आकाशसँग ‘रामकहानी’, ‘सम्झना विर्सना’, ‘पोइ पर्‍यो काले’ र ‘सम्हालिन्छ कहिले मन’ मा रोमान्स गरिसकेकी पूजाले पलसँग भने ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ को दुई श्रृंखलामा जोडी बाँधेकी छन् । यी तीन स्टार्सलाई एउटै फिल्ममा हेर्न चाहने दर्शकको संख्या पनि ठूलो छ । तर, अहिलेसम्म यो संयोग जुरेको थिएन । अब, एक फिल्ममा उनीहरु एकसाथ देखिने सम्भावना देखिएको छ ।
पर्दामा अभिनेत्री पूजा शर्माको जोडी अभिनेता द्वय पल शाह र आकाश श्रेष्ठसँग निकै रुचाइएको छ । पलभन्दा पनि आकाशसँग उनको जोडी धेरै रुचाएको पाइन्छ । त्यसैले पनि उनीहरु अहिले भकाभक फिल्म गरिरहेका छन् । दर्शकको चर्को मागका कारण यी दुईलाई लिएर फिल्म बनाउन चाहने निर्माताहरु धेरै छन् । हालै उनीहरुले फिल्म ‘सम्झना विर्सना’ को छायांकन सकाए ।
गोपीकृष्णले निर्माण गर्न लागेको २०६४ सालको सुपरहिट फिल्म ‘पर्खि बसें’ को सिक्वेलमा पल, पूजा र आकाशले एकसाथ काम गर्न सक्ने प्रवल सम्भावना छ । सौरभ चौधरीले निर्देशन गर्ने फिल्मको वान लाइन स्टोरी उनीहरुले सुनिसकेको स्रोत बताउँछ । पूजा र आकाश फिल्म गर्ने मनस्थितिमा समेत पुगेको बताइएको छ । तर, पल भने दोधारमा देखिएको जानकारी प्राप्त छ ।
दीपक श्रेष्ठ निर्देशित फिल्म ‘पर्खि बसें’ मा अभिनेता द्वय राजबल्लभ कोइराला र निखिल उप्रेतीसँगै अभिनेत्री युना उप्रेतीको प्रमुख भूमिका थियो । पहिलो श्रृंखलाझैँ यसको सिक्वेलमा पनि दुई नायक र एक नायिका हुनेछन् । नायकमा पल र आकाशलाई प्रस्ताव गरिएको छ भने नायिकामा पूजालाई अफर गरिएको छ ।
यद्यपि, यस विषयमा निर्माण टिमले भने कुनै जानकारी दिएको छैन । पल, पूजा र आकाश ‘पर्खि बसें २’ गर्न राजी भएको खण्डमा यी तीनलाई एकसाथ पर्दामा हेर्न निकै रोचक हुनेछ । फिल्मको कास्ट एण्ड क्रियू एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै सार्वजनिक गर्ने तयारीमा टिम रहेको छ । यसको रिलिज २०७७ सालमा हुनेछ । पहिलो सिरिजझैँ दोस्रोमा पनि सांगीतिक प्रेमकथा देखाइने निर्देशक चौधरीले बताएका छन् । फिल्मको कथा पनि उनकै हो ।
ऐतिहासिक रानी पोखरी पुन: निर्माणको काम तीव्र